အထင်ကရ ပန်းချီဆရာတွေရဲ့ ပန်းချီကားထဲက အမျိုးသမီး ၁၃ ဦး၏ လက်တွေ့ဘဝများ - ONE DAILY MEDIA
Pablo Picasso သည် ၎င်း၏ဇနီး ရုရှားဘဲလေးအကသမား Olga Khokhlova ၏ ပုံတူပန်းချီများကို ၁၇ နှစ်ကြာ ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ အစတွင် အနုပညာရှင်သည် Olga ကို လက်တွေ့ဆန်သောပုံစံဖြင့် ဆွဲယူခဲ့သော်လည်း ပြီးဆုံးခါနီးတွင် ပီကာဆိုသည် surreal ပုံစံကို စတင်အသုံးပြုလာသောကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ပုံတူများသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်းကို အမှန်တကယ်ပုံဖော်ထားကြောင်း နားလည်ရခက်ပါတယ်။ ပီကာဆိုကဲ့သို့ပင် အနုပညာရှင်ကြီးများ၏ မော်ဒယ်များသည် ၎င်းတို့၏ ချစ်သူများ၊ muses နှင့် ဇနီးများဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဤအမျိုးသမီးများသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် မည်သို့သောပုံပေါက်ခဲ့သနည်း။ သူတို့ ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ ??
ပန်းချီကားများအတွင်းမှ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နှင့် ကျော်ကြားသော အမျိုးသမီးများ၏ တကယ့်ဓာတ်ပုံများကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ဆောင်းပါး၏အဆုံးတွင်၊ သင့်အတွက် အပိုဆုတစ်ခုရှိသည်- Auguste Rodin သည် သူ၏မော်ဒယ်နှင့် ချစ်သူကို မည်သို့မြင်တွေ့ခဲ့သည်ကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
(1) Adele Bloch-Bauer, Gustav Klimt’s model
Adele Bloch-Bauer သည် လေးစားဖွယ်ကောင်းသော ဘူဇွာမိသားစုတွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီးသူမ၏ဖခင်သည် Vienna ဘဏ်သမဂ္ဂ၏ CEO ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် 18 နှစ်တွင် သူမထက် သိသိသာသာ အသက်ကြီးသော အနုပညာချစ်သူ Ferdinand Bloch-Bauer နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ Adele သည် Gustav Klimt ၏ အရေးပါသော ပန်းချီကား ၄ ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အကျော်ကြားဆုံးမှာ Adele Bloch-Bauer (ညာဘက်တွင်) ပုံတူဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းချီကားကို The Lady in Gold သို့မဟုတ် Gold in Woman အဖြစ်လည်း လူသိများပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်သည် Adele ၏ခင်ပွန်းသည် Adele နှင့် Klimt အကြားတွင် အချစ်ရေးဆက်ဆံရေးရှိကြောင်း အခိုင်အမာယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်းချီဆရာသည် ၎င်း၏ဇနီးကို စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးစေရန်အတွက် Bloch-Bauer က သူ့ဇနီး၏ပုံတူပုံကို Klimt အားရေးဆွဲရန် စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ သူသည် ပန်းချီဆရာအနီးတွင် အချိန်များစွာ ကုန်ဆုံးပါက သူ့အပေါ် ငြီးငွေ့လာမည်ဟု မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။။ ပန်းချီဆရာသည် ပန်းချီကားပေါ်တွင် ၄ နှစ်ကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး မူကြမ်း ၁၀၀ ရေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွင် ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှိလျှင်ပင် ဤကာလအတွင်း အမှန်တကယ် အေးစက်သွားနိုင်ပါတယ်။
(2) Jeanne Hébuterne, Amedeo Modigliani’s model
Jeanne Hébuterne သည် ပုဂ္ဂလိကအနုပညာကျောင်းဖြစ်သော Académie Colarossi တွင် ပညာသင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အကယ်ဒမီကျောင်းသားတွေကို မော်ဒယ်တွေအဖြစ် ရွေးချယ်မယ့် အီတလီအနုပညာရှင် Amedeo Modigliani နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ များမကြာမီ သူတို့သည် အချစ်ရေးတစ်ခု စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Jeanne သည် Modigliani နှင့်အတူ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပြီး သူမသည် ပန်းချီကားများ၏ အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပန်းချီဆရာသည် သူ၏ပုံတူများထဲမှ ၂၅ ပုံခန့်ကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။ သူတို့လင်မယားမှာ သမီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Modigliani သည် တီဘီဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ ခံစားခဲ့ရပြီး 35 နှစ်အရွယ် 1920 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ Jeanne Hébuterne သည် ၎င်းတို့၏ ဒုတိယမြောက်သားကို ကိုယ်ဝန်ရှိကာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သေဆုံးပြီးနောက် နောက်တစ်နေ့တွင် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခဲ့သည်။ Amedeo နှင့် Jeanne ၏သမီးကို ပန်းချီဆရာ၏ညီမမှ မွေးစားပြီး ကြီးပြင်းစေခဲ့ပါတယ်။
(3) Suzanne Valadon modeled for Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, and others
အ၀တ်လျှော်အိမ်အကူ၏သမီး၊ ပြင်သစ်အနုပညာရှင် Suzanne Valadon သည် French Union of Artists ထဲသို့ ၀င်ရောက်သည့် ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Auguste Renoir၊ Henri de Toulouse-Lautrec နှင့် Edgar Degas အပါအဝင် နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်များစွာအတွက် မော်ဒယ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Auguste Renoir သည် Bougival at Dance and Dance in the City. ဟုခေါ်သော သူ၏ လက်ရာ ၂ ခုတွင် သူမကို ပန်းချီဆွဲခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် Henri de Toulouse-Lautrec သည် Suzanne ကို လုံးဝကွဲပြားသည့်ပုံစံဖြင့် ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်းချီဆရာ၏ပုံတူတွင်၊ သူမသည် ညှိုးငယ်သောမျက်နှာ၊ မည်းမှောင်နေသည့်အကြည့်နှင့် နှုတ်ခမ်းနီများရှိပါတယ်။ Suzanne ၏လက်ရာများကို ပထမဆုံးမြင်ရပြီး ပန်းချီဆွဲရန် အားပေးခဲ့သူမှာ Toulouse-Lautrec ဖြစ်ပါတယ်။ သူမမွေးတုန်းက သူ့နာမည်က Marie-Clémentine ဖြစ်ပါတယ် ။ စကားမစပ်၊ သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အနုပညာသည် သူမအသက်ရှင်နေစဥ် တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် ငွေကြေးအောင်မြင်မှုတို့ကို ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။
(4) Actress Jeanne Samary, Renoir’s model
Jeanne Samary သည် Comédie-Française ပြဇာတ်၏ ပြင်သစ်မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမ လက်ထပ်မီတွင် Pierre-Auguste Renoir ၏အလုပ်ရုံနှင့်မဝေးသောနေရာတွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး မကြာခဏဆိုသလို သရုပ်ဖော်ရန်ရန်သူမထံသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၇၇-၁၈၇၈ တွင် ပန်းချီဆရာသည် Jeanne ၏ ပုံတူ ၄ ပုံ ကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုစီသည် ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အရွယ်အစားအရ အခြားသူများနှင့်
အလွန်ကွာခြားပါတယ်။ အကျော်ကြားဆုံးတစ်ခုမှာ မော်စကိုတွင်တည်ရှိသော Jeanne Samary ပုံတူဖြစ်ပါတယ်။
(5) Jane Avril, Toulouse-Lautrec’s model
Jane Avril သည် Parisian Moulin Rouge မှကချေသည် ၊ အနုပညာရှင် Toulouse-Lautrec ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ Jane သည် 1889 Molin Rouge ဖွင့်ပွဲတွင် ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး အလွန်ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် ဥရောပမြို့ကြီးများတွင် လူကြိုက်များသော Can-can ကို ဖန်တီးခဲ့သူဟာ Avril ဖြစ်ပြီး သူမသည် ပြင်သစ် ကာဘာရက်ထက် ကျော်လွန်၍ နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ ပြပွဲနှင့်အတူ ခရီးသွားများခဲ့ရပါတယ်
Toulouse-Lautrec သည် Jane Avril ကို ပုံတူ ၁၅ ချပ်၊ ပန်းချီကား ၂၀၊ ပိုစတာ ၂ ချပ်တို့ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ် ပန်းချီကားများသည် သူမ၏ ကခုန်ခြင်းကို ပြသရုံသာမက သူမ၏ နေ့စဉ်ဘ၀ကိုပါ ပြသထားပါတယ်။
(6) Actress Sarah Bernhardt by Alphonse Mucha
ချက်အနုပညာရှင် Alphonse Mucha သည် နာမည်ကြီး ပြင်သစ်ဒရာမာမင်းသမီး Sarah Bernhardt နှင့် ပူးပေါင်းခြင်းကြောင့် ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ Mucha သည် Bernhardt အတွက် ပိုစတာတစ်ခုနှင့် Gismonda ရှိုးအတွက် သူမ၏ Renaissance ပြဇာတ်ရုံတွင် စတင်ခဲ့ သော ပိုစတာသည် အလွန်ရေပန်းစားခဲ့ပြီး မင်းသမီးသည် ၎င်းကို အလွန်နှစ်သက်သောကြောင့် အနုပညာရှင်နှင့် ၆ နှစ် သီးသန့်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဤနှစ်များအတွင်းတွင် Sarah Bernhardt (ညာဘက်) ပိုစတာများကို ရှိုးပွဲများအတွက် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး တေးဂီတပြဇာတ်များနှင့် ပြဇာတ်ပြကွက်များဖြင့် အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤပိုစတာတွင် Mucha သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ဖြစ်‌သော mosaic နောက်ခံ၊ အသီးအနှံအဆင်တန်ဆာများ၊ အဓိကဇာတ်ကောင်၏ လှပသောဆံပင် နှင့် ထီးဆောင်းပုံနှင့်ဆင်တူသော ဦးခေါင်းအထက် စက်ဝိုင်း စသည်တို့ကိုအသုံးပြုထားခဲ့ပါတယ်။
(7) Gala Dalí (Elena Diakonova), the wife, muse, and model of Salvador Dalí
Elena Diakonova သို့မဟုတ် သူမကိုယ်သူမ Gala ဟုခေါ်သည့် သူမဟာ Salvador Dalí ထက် 10 နှစ်ပိုကြီးသည်။ သူတို့သည် 1919 တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ထိုအချိန်တွင် သူမသည် ပြင်သစ်ကဗျာဆရာ Paul Éluard နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ Dalí နှင့် Gala တို့သည် သူမသေဆုံးချိန်အထိ ၅၃ နှစ်ကြာ အတူရှိခဲ့ကြပါတယ်။
သူမသည် ပန်းချီဆရာ၏ ဇနီး၊ မော်ဒယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ Gala သည် ငွေကြေးကိစ္စအားလုံးကို ဂရုစိုက်ပြီး သူ၏အနုပညာကို အမြတ်အစွန်းရစေခဲ့ပါတယ် ။ Dalí သည် မရေမတွက်နိုင်သော ပုံတူများကို ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။
(😎 Sylvette David, Pablo Picasso’s model
A post shared by @artistjewel
1950 ခုနှစ်များအလယ်တွင် ပီကာဆိုသည် ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တစ်ခါက သူ၏စတူဒီယိုဘေးရှိ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု၏ လှေကားထစ်တွင် ရွှေရောင်ဆံပင်ရွှေရောင်မိန်းကလေးတစ်ဦးကို သူမ သတိမထားမိမီတွင် ပန်းချီဆွဲခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပန်းချီကားများကို သူမအား ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူ့အတွက် သရုပ်ဆောင်ဖို့ သဘောတူလားလို့ မေးတဲ့အခါ သူမက ခေါင်းညိတ်ခဲ့ပြီး သူမ၏အမည်မှာ Sylvette David ဖြစ်ပါတယ်။
Picasso နှင့် Sylvette David တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ဆက်တိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ရွှေရောင်ဆံပင်ကို မြင်တာနဲ့ ၎င်းတို့ကို အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ ပီကာဆိုသည် Sylvette ၏ ပုံ ၆၀ ကျော်ကို ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ သူသည် သူမအား ပုံတူတစ်ပုံအားရောင်းလိုက်သောအခါတွင် ရရှိသည့်ငွေဖြင့် ပဲရစ်မြို့ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(9) Olga Khokhlova (when married to Picasso), the wife and model of Picasso
Olga Khokhlova သည် ရုရှားဘဲလေးအကသမား၊ Ballets Russes အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Pablo Picasso ၏ဇနီးဖြစ်ပါတယ်။ Khokhlova နှင့် Picasso တွင် Paulo အမည်ရှိ သားတစ်ယောက်ရှိပြီး သူတို့သည် ၁၇ နှစ်ကြာ အတူနေထိုင်ပြီးနောက် လမ်းခွဲခဲ့ကြသော်လည်း Olga သည် Picasso ၏ဇနီးသည် အဖြစ် ၃၇ နှစ်ကြာ သူမသေဆုံးသည့်နေ့အထိ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပီကာဆိုသည် သူ၏ ပန်းချီများအပါအဝင် သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ခွဲ ဝေရန် ငြင်းဆိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ဖက်များကြား ခက်ခဲသောဆက်ဆံရေးကို သူ၏ပန်းချီကားများတွင် ထင်ဟပ်စေခဲ့တယ်။ ၎င်းတို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်းအစတွင် Olga သည် ပိုမိုလက်တွေ့ကျပုံရပြီး ဆက်ဆံရေးအဆုံးတွင် ပီကာဆိုက သူမကို ပိုမိုဆန်းကြယ်သောပုံစံဖြင့်ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။
(10) Jacqueline Roque, the wife and model of Pablo Picasso
Jacqueline Roque သည် Pablo Picasso ၏ ဒုတိယဇနီးဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းချီဆရာ Roque ကို ပထမဆုံးတွေ့တုန်းက သူမသည် အသက် 26 နှင့် 72 နှစ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆုံတွေ့ပြီး6နှစ်အကြာတွင် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သူသေဆုံးသည့်နေ့အထိ သူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးသည် ၁၁ နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ်။ ပီကာဆိုသည် Jacqueline ၏ ပုံတူပုံပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး အခြားမော်ဒယ် သို့မဟုတ် ချစ်သူများထက် ပိုဆွဲခဲ့ပါတယ်။ Jacqueline Roque သည် ပီကာဆိုသေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ခက်ခဲစွာဖြေရှင်းခဲ့ရပြီး 13 နှစ်အကြာတွင် သူမကိုယ်သူမ သက်သေခဲ့ပါတယ်။
Jacqueline With Crossed Hands ပန်းချီသည် Pablo Picasso နှင့် Roque ၏ အကျော်ကြားဆုံးပုံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(11) Lydia Delectorskaya, Henri Matisse’s model
A post shared by Marie Amelie Sikkink (@amelsik)
Lydia Delectorskaya သည် ပြင်သစ်အနုပညာရှင် Henri Matisse ၏အတွင်းရေးမှူး ရုရှားစကားပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ Nice ရှိ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွင် အလုပ်‌ခေါ်စာကို ဖတ်ပြီးနောက် Matisse နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။
အသက် 22 နှစ်အရွယ် Delectorskaya သည် အသက် 63 နှစ်အရွယ် Matisse ၏မိခင် အတွက်သူနာပြုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွင် ပန်းချီဆရာက သူမသည် ပြီးပြည့်စုံသောမော်ဒယ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိလာခဲ့တာ‌ ကြောင့် Lydia သည် သူနာပြုတစ်ဦးသာမက Matisse ၏ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပြီး တစ်နေ့လျှင် ၃-၄ နာရီမျှ သူ့အတွက် သရုပ်ဆောင်ပေးပါသေးတယ်။ တစ်နှစ်လျှင် ၂ ကြိမ်၊ Matisse သူ၏ပုံများကို တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်းချီဆရာ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် Lydia သည် Hermitage နှင့် Pushkin State Museum of Fine Arts တို့ကို သူ့ထံမှ အမွေဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။
(12) Bella Rosenfeld, Marc Chagall’s wife and model
Chagall အလုပ်လုပ်နေချိန်တိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ပုံတစ်ပုံရှိနေပြီး ၎င်းဟာသူ၏ဇနီးဖြစ်သူ Bella Chagall ဖြစ်ပါတယ် ။ “Bella နဲ့ အတူရှိတဲ့အခါ လမ်းမလျှောက်ဘူး၊ ပျံသန်းနေရပါတယ်” လို့ ပန်းချီဆရာက ပြောဖူးပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သူသည် မြေပြင်ထက်တွင် ခုန် ပေါက်နေသော ချစ်သူများကို မကြာခဏ ဆွဲခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ရာနှင့်ချီသော သူ၏လက်ရာများတွင် သူ့ဇနီး၏ပုံကို သင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ 1944 ခုနှစ်တွင် Bella ကွယ်လွန်သောအခါ Chagall သည် ၎င်း၏အလုပ်သို့ တစ်နှစ်တာမျှ ပြန်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ သူမ သေဆုံးပြီးသည့်တိုင် သူမပုံများကို ဆက်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။
(13) Jane Morris, the Pre-Raphaelite muse
1857 တွင် Jane နှင့် သူမ၏ညီမတို့သည် အနုပညာရှင် Dante Gabriel Rossetti နှင့် Edward Coley Burne-Jones တို့၏ ပြဇာတ်ရုံသို့ သွားကြပါတယ်။ ဂျိန်း၏ အလှကို သဘောကျကြပြီး နှစ်ယောက်လုံးက သူမကို ဟသရုပ်‌ေဆာင်ရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူမဟာ William Morris ထံတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပါ‌သေးတယ်။
အိမ်ထောင်မပြုမီက Jane သည် ပညာမတတ်သော်လည်း အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက်တွင် သီးသန့်သင်ခန်းစာများကို စတင်သင်ယူကာ အီတလီနှင့် ပြင်သစ်တို့ကို သင်ယူကာ စန္ဒယားတီးသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Bernard Shaw ၏ပြဇာတ် Pygmalion မှာ Jane သည် Eliza Doolittle ၏ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်နိုင်သည်ဟု ထင်မြင်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ညာဘက်တွင် Jane Morris သည် 1898 ခုနှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သော Rossetti ၏ The Blue Silk Dress ဖြစ်ပါတယ်။
Bonus – Camille Claudel, Auguste Rodin’s lover and student
Camille Claudel သည် အမျိုးသမီးများကို အနုပညာကျောင်းများသို့ ဝင်ခွင့်မပေးသည့်အချိန်အတွင်း Académie Colarossi ဟုခေါ်သော ပုဂ္ဂလိကအနုပညာကျောင်းတွင် ပညာသင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပန်းပုပညာ သင်ပေးတဲ့ Rodin နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် မကြာမီတွင်၊ သူမသည် သူမ၏ ဆရာ၏ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး သူ၏ မော်ဒယ်၊ ချစ်သူနှင့် ပုံဖော်စရာ အရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ ဝေဖန်သူများက Camille Claudel ၏ ပန်းပုဆရာတစ်ဦးအဖြစ် အရည်အချင်းကို ချီးကျူးခဲ့ကြပြီး သူမ၏လက်ရာများကို သဘောကျခဲ့ကြပါတယ်။
Camille သည် သူမ၏ဘဝ၏နောက်ဆုံးနှစ် 30 တွင် စိတ်ရောဂါကုဌာနတစ်ခုတွင် နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူမသည် သူမ၏ လက်ရာများအားလုံးကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး Rodin သည် သူမ၏ ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များစွာကို ခိုးယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ပါသေးတယ်။
သင်ရော နာမည်ကြီး ပန်းချီဆရာတွေအတွက် သရုပ်ဆောင်ပေးချင်ပါသလား ??